Precision Engineering | thetpaimyo
Posted by မောင်ပိုင် on June 1, 2012
မင်္ဂလာပါ။Myanmar Engineer Forum ထဲမှာ Register လုပ်ထားပေမယ့် Member တစ်ယောက်အနေနဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ၊မိတ်ဆွေ အကိုအမတွေကိုဘာမှမမျှဝေပေးနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက် ကိုယ့်စိတ်ကိုကိုယ်မလုံသလိုခံစားရပါတယ်။ကျောင်းတက်နေဆဲ ဖြစ်တဲ့အတွက် ပညာရပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအနေနဲ့ ကျွန်တော်ဆီမှာဘာမှမရှိသေးပါဘူး။ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် အခုလောလောဆယ်ရောက်ရှိနေတဲ့ နည်းပညာနယ်ပယ်ရပ်လေးတစ်ခုအကြောင်းကို ဝေမျှပါရစေ။ကျွန်တော်ကYatanarponCybercityတက်နေတာပါ။ကျွန်တော်တို့ကျောင်းက ၂၀၁၀-၂၀၁၁ ပညာသင်နှစ်ကမှ စဖွင့်တာပါ။ကျွန်တော်တို့ကျောင်းကတစ်ခြားနည်းပညာတက္ကသိုလ်(TU)တွေနဲ့ ဘယ်လိုကွာခြားသလဲတော့ ကျွန်တော် သေသေချာချာမသိဘူးခင်ဗျ။ကျွန်တော်သိသလောက်ကတော့ TU က Text Book တွေကို ကျွန်တော်တို့ဆီမှာနာမည်ပြောင်းပြီးသင်ပေးတာကတော့ သေချာပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကျောင်းရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က Asian Countries တွေနဲ့ ဆက်သွယ်ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ တစ်ခုတည်းသော မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ Cyber University ဖြစ်ဖို့ပါ တဲ့။ရည်ရွယ်ချက်တိုင်းဖြစ်ဖို့ ကျောင်းသားတစ်ယောက်အနေနဲ့ကော၊နိုင်ငံသားတစ်ယောက်အနေနဲ့ပါ မျှော်လင့်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကျောင်းမှာမေဂျာ (၄) ခုရှိပါတယ်။
1.Information& Communication Technology
4.Advanced Materials Engineering တို့ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော် အဓိကယူထားတဲ့မေဂျာက Precision Engineering ဆိုတော့ Pre မေဂျာအကြောင်းကိုပဲအဓိကကျွန်တော်တင်ပြပါရစေ။ကျွန်တော်တို့မေဂျာမှာဘာသာ( ၉ ) ဘာသာသင်ရပါတယ်။
5.Principle of Electrical Engineering
8.Intro to Computer System
9.Engineering Drawing တို့ပါ။
ကျွန်တော် လေ့လာမိသလောက် Precision Major ဟာ Engineering Role တစ်ခုအဖြစ် စတင်ခဲ့တာလွန်ခဲ့တဲ့ သုံး၊လေး နှစ်လောက်ကမှ ပါ။Major တစ်ခုအနေနဲ့ ကမ္ဘာပေါ်မှာတောင် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် မဖြစ်တည်သေးတဲ့အတွက် ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ ကျွန်တော်တို့ကျောင်းကပဲအရင်ဆုံးအစပြုတယ်လို့ပဲပြောရမယ်ထင်တယ်။နည်းပညာတက္ကသိုလ် (TU) တွေက MP မေဂျာနဲ့ လုံးဝနီးပါး ဆက်စပ်ပါတယ်။(ကျွန်တော် အခုသင်နေရတဲ့ ပထမနှစ်သင်ရိုးတွေ အရပါ)။နောက်ပညာသင်နှစ်တွေမှာဆက်တူသေးသလားတော့ ကျွန်တော် မသိပါဘူး။ဒါပေမယ့် MP နဲ့မနီးစပ်ပဲ IT ပိုင်းအရ ကျွန်တော်တို့ Pre မေဂျာမှာထူးထူးခြားခြားသင်ရတဲ့ Intro to Computer System (ICS) ဘာသာရပ်အကြောင်း ကျွန်တော် ဆက် ဆွေးနွေးချင်ပါတယ်။ဒီ ICS မေဂျာက ကျွန်တော်တို့ကျောင်းအခေါ်အရ ICT (Information & Communication Engineering) မေဂျာမှာ Computer Fundamental ဘာသာရပ်၊ Basic System Components ဘာသာရပ် အနေနဲ့ သင်ရပါတယ်။( TU တွေမှာတော့ IT မေဂျာမှာသင်ရမယ်ထင်တယ်။)ကျွန်တော် အခုသင်နေရတဲ့ Second Semester သင်ရိုးကိုအရင် မိတ်ဆက်ပေးပါမယ်။First Semester မှာသင်ခဲ့ရတာတွေကိုတော့ မေ့တဲ့ဟာတွေမေ့၊(မကျက်ခဲ့တာတွေလဲ ပါ တယ်) ဆိုတော့ ကျွန်တော် အချိန်သေသေချာချာပေးပြီး ပြန်ရေးပေးပါမယ်။ကဲ..စလိုက်ကြရအောင်။(ကျေးဇူးပြုပြီးအကိုအမ၊သူငယ်ချင်းများခင်ဗျာ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် ကိုကသင်ယူနေရတဲ့သူဖြစ်နေသေးတာကြောင့် ကျွန်တော်ပြောသမျှအားလုံးဟာမပြည့်စုံနိုင်ဘူး၊အမှားတွေပါနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့် ကျွန်တော့်အမှားတွေကိုအမှန်အဖြစ်ပြင်ပေးဖို့ကိုလည်းရိုသေစွာတောင်းဆိုပါတယ်။Forum ထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊thetpaimyo103@gmail.com ကို mail ပို့ပြီးတော့ ဖြစ်ဖြစ် အကြံပေးထောက်ပြနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
ပထမဆုံးစသင်ရတဲ့အခန်းက Chapter -5 Computer Software ပါ။
ပေးထားတဲ့ Assignment အရ Software ဆိုတာကိုအောက်ပါအတိုင်းအဓိပါယ် ဖွင့်ဆိုထားပါတယ်။
Software is the part of the computer system which enables the hardware to operate.Computer software can be divided into two major classifications,
ပထမဆုံးပြောထားတဲ့ System software အကြောင်းဆွေးနွေးကြရအောင်။
Its main function is to bridge the differences that exist between the user needs and the capabilities of hardware.
လို့ပြောထားပါတယ်။ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်ယူဆတာကတော့ အဲလောက်ရှုပ်ရှက်ခပ်နေတဲ့ sentences တွေနဲ့ မှတ်မနေသင့်ဘူးထင်တာပဲ။နာမည်ကိုက system software ဗျာ။Systemပိုင်းနဲ့ ပဲသက်ဆိုင်တဲ့ software လို့ပဲသိထားရင်ကောအဆင်မပြေဘူးလား။(ကျွန်တော့်အထင်ပြောတာပါ။စာမေးပွဲဆိုတဲ့အရပေးထားတဲ့အတိုင်းတော့ ကျက်ဖြေရမှာပေါ့နော်)။System software ကိုအောက်ပါအတိုင်းခွဲခြားထားပါတယ်။
The software that manages the resources ofacomputer system and schedules its operation is called the operating system.The operating system acts as an interface between the hardware and the user programs and facilitates the execution of the programs.It is basicallyasoftware control program which resides in memory at all times and supervises all other programs that run in the computer.The user communicates with the OS supplies application programs and input data that are inalanguage and format acceptable to the OS and receives the output results.
ကျွန်တော်တို့ ကြားဘူးနေတဲ့ Operating System ဆိုတာဘာလဲလို့သေသေချာချာရှင်းပြထားတဲ့ စာပိုဒ်ပါ။(ခင်ဗျားတို့တော့ မသိဘူး ကျွန်တော်ကတော့ OS..OS နဲ့ကြားဘူးနေပေမယ့် ခုမှ ဘာဆိုတာသေသေချာချာသိလိုက်ရသလိုဖြစ်သွားတော့ အရမ်းပျော်တာပဲဗျာ။)အောက်မှာ OS ရဲ့ function တွေကို ပြန်၇ှင်းပြပေးထားပါတယ်။
The functions of the operating system can be listed as follows:
1.An operating system locates memory space and load output data.
2.It provides automatic recovery from many types of errors like input read error,arithmetic overflow.
3.Inamultiprogramsystem,many programs can reside simultaneously in the computer.
4.The operating system locates various computer resources to selected programs and keeps switching resources back and forth.Resources like CPU,peripheraldevices,etc.
5.Inatime sharing system,it locates to each jobatime-slice onapriority basis.
6.The operating system contributes toamore efficient use of the hardware by managing memory resources.Some popular examples of operating system are MS-DOS,UNIX,etc.